Samachar Batika || News from Nepal » धेरै समय स्क्रिन अघि बस्नु घा’तक, जोगिने कसरी……?
धेरै समय स्क्रिन अघि बस्नु घा’तक, जोगिने कसरी……?
जारी लकडाउनको समयमा धेरैले टिभी, मोबाइलवा ल्यापटपको स्क्रिन गरेर समय बिताउने गरेका छन् । जसकारण धेरैमा अनेकखाले स्वास्थ्य स’मस्या देखिनथालेको छ । कतिपयलाई स्क्रिन हेर्न छाड्ने बित्तिकै टाउको दु’ख्ने वा जिउभा’री हुने समस्या देखिएको बताइएको छ । त्यसैले यसबारे सबै सचेत हुनआवश्यक छ । र सावधानीका उपायअपनाउनु जरुरी छ ।
हामी स्क्रिनमा घण्टौ समयबितेको पत्तै पाउँदैनौं । परामर्शदाता मनोचिकित्सक तथा नाइटिबभिगेल अस्पताल मान’सिक स्वास्थ्य इकाईका टेक्नोलोजी विशेषज्ञ डा.काबल नगका अनुसार एकपटक स्क्रीनमा एक घण्टा भन्दा बढी समय खर्च नगर्नुहोस् । प्रतिघण्टा १० मिनेट ब्रेक लिनु लाभदायक हुन्छ । किनभने कम्प्युटरमा लामो समयसम्म काम गर्दा तपाईंको आंखा स्क्रिनले तान्न सक्छ, टाउको दु’ख्ने र आंखा बेचैन गराउने जस्ता समस्या आउंछन् । यहीं कुरातपाईको मान’सिक स्वास्थ्यमा पनि लागू हुन्छ । ब्रेक लिएर त्यस्ताउपकरण प्रयोग गर्दा धेरै हद समस्याको समाधान हुन्छ ।
जब समस्याका लक्षण देखापर्छन् तब मात्रै हामी फोन, ट्याबलेट वा टिभीबाट टाढा हट्न चाहन्छौं । कहिलेकाही तपाईं स्वचालित रूपमा यसमा जान चाहानुहुन्छ र तपाईंको उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो एक बानी हो । त्यसबाट बँच्न, तपाईका ट्रिगरहरू (उ’त्तेजना वा कुनै प्रकारको अ’शान्ति) पहिचान गर्नुहोस् । सान्त्वनाका लागि पर्दामा जानुको सट्टा, बिषय के हो भनेर कसैसंग छलफल गर्नुहोस् । यस बारे लेख लेख्नुहोस् वा वैकल्पिक कुनै उपाय खोज्नुहोस् ।
५. स्क्रिन बिनाका शारीरिक गतिविधिहरुसकेसम्म स्क्रिन बिनाका गतिविधिमा जोड दिनुहोस् । जस्तैः सरसफाई, बगैंचा सरसफाई, खाना बनाउने, कपडा धुने लगायत । यसले हामीलाई स्क्रिनसँग टाढा रहँदै स्वस्थ्य रहन सहयोग पु¥याउँछ ।
कतिपयलाई स्क्रिन हेर्न छाड्ने बित्तिकै टाउको दु’ख्ने वा जि’उभारी हुने सम’स्या देखिएको बताइएको छ । त्यसैले यसबारे सबै स’चेत हुनआवश्यक छ । र सावधानीका उपाय अपनाउनु जरुरी छ ।
प्रकाशित मिति १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:०९